Guusha dhabta ahi waa midda timaadda guul-darrooyin badan kadib! – Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
Guusha dhabta ahi waa midda timaadda guul-darrooyin badan kadib! | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
Home Entertainment Guusha dhabta ahi waa midda timaadda guul-darrooyin badan kadib!
Shan sano ayuu jirey markii aabihiis geeriyoodey, 16sano markii uu gaareyna wuxuu ka tegey waxbarashada. 17 jir markii da’disu ahayd waxaa laga eryey afar shaqo, sanad kadibna wuu guursadey.
Sanadkiisii 19aad wuxuu noqdey aabe. 20 markii uu gaarey ayey xaaskiisii ka carootay iyadoo horay usii kaxaysatay gabadha keliya ee uu dhalay.
Dabadeed wuxuu shaqo yar ka helay maqaayad isagoo hawshiisu markii hore ahayd weel dhaqista, markii dambese u dallacay cunto-kariye, nasiib darro shaqadaas waqti dheer masii joogin oo wuu ku fashilmey.
Wuxuu isku dayey in uu dib ula midoobo xaaskiisa iyo gabadhiisa, marar badan ayuu ku guuldareystey qorshahaas inkastoo ugu dambeyntii uu ku qanciyey xaaskiisa inay usoo noqoto. Dabadeed wuxuu bilaabay dareewalnimo inuu ku shaqeysto isagoo muddo kooban noqdey dareewal taksi, haseyeeshee taasina ma noqon mid uu ka mira keeno. Ciidamada ayuu ku biiray, muddo kooban kadib waa laga eryey ciidanka.
Dabadeed wuxuu dalbaday in uu barto qaanuunka, jaamacaduse way diidey inay aqbasho codsigiisa. Ugu dambeyntii wuxuu u wareegey dhanka suuq-geynta iyo caymiska, shaqadaasna sidii caadada u ahayd wuu ku fashilmay.
HEES KA HADLEYSA GUUSHA
Markii uu gaarey da’da 65 ee uu hawl-gab noqdey, waxay dowladdu siisey lacag yar oo lasiiyo dadka shaqada ka fariista, saamiga uu helay xilligaas wuxuu ahaa $150 (Boqol iyo konton doollar). Maalinta uu lacagta helay maalintii ku xigtey wuxuu go’aansadey inuu is-dilo, maadaama uu aaminsanaa inuu ku guuldaraystey nolosha, kana gaabiyey xaqiijinta yoolashii uu higsanayey.
Wuxuu hoos fariistey geed ku dhow gurigiisa, isagoo gacanta ku haysta warqad iyo qalin si uu u qoro dardaarankiisa. Markii uu warqadda iyo qalinka isa saaray, wuxuu isweydiiyey su’aalo badan.
Wuxuu garowsadey inay jiraan waxyaabo badan oo uu ku fashilmey, balse ay u dhiman yihiin waxyaabo badan oo uu ka guul gaari karo. Wuxuu aaminsanaa in uu leeyahay xirfad sare oo dhanka cunto-karinta ah. Go’aan deg deg ah ayuu qaatey.
Lacagtii uu haystey ee ahayd boqol iyo kontonka doolar, wuxuu isticmaalay 87 doolar oo kamid ah.
Wuxuu tegey suuqa, si uu u soo gato xoogaa qudaar ah, hilib digaag, maqlaha cuntada lagu shiilo, saliid iyo inyaroo xawaashyo ah.
Maalintaas wixii ka dambeeyey, wuxuu bilaabay ka ganacsiga hilibka digaagga ee shiilan, wuxuu hilibka ku diyaarin jirey gurigiisa, dabadeedna wuxuu kusoo wareejin jirey jidadka tuulada North Corbin ee gobolka Kentucky ee dalka Maraykanka. Muddo kooban kadib ganacsigiisii yaraa horumar weyn ayuu sameeyey, macaamiil badanna way ku xirmeen.
Markii uu gaarey da’da 88jir -xiligaas oo ku beegnayd 23 sano kadib- markii uu shaqadaas bilaabay, wuxuu ahaa bilyoneer dunida oo dhan caan ka ah.
Ninkaasi waa Harland Sanders (1890-1980). Shirkaddii uu asaasay oo [hadda] lagu magacaabo Kentucky Fried Chicken (KFC) waxaa hoos taga 20,000 oo maqaayadood oo ku kala yaal 123 dal oo caalamka ah, taas oo qiimaha ay [xilligan] ku fadhidaa gaarayo adduun lacageed oo dhan 23 bilyan oo doolar. Waana shirkadda labaad ee ugu weyn dunida kuwa ka ganacsada maqaayadaha iibiya cuntada fudud.
Dulucda sheekadani waxa weeye, ogow isku-day walba oo guuleysta waxaa ka horreeyey iskudayo badan oo fashilmey. Guusha dhabta ahina waa midda timaada dadaal badan iyo jab xoog leh dabadood. Guusha sida sahlan lagu gaaro inta badan ma noqoto mid loo aayo.
Xuquuqda shekadan waxaa leh Xaaji Dirir
886 Booqashada dhan 4 Booqashada maanta
Previous PostDhoom Reloaded Hindi Af Somali Next PostMa Atoore Nimo jaceylbaa, mise waa xirfad cusub, Bal daawo Ninkan Dhalinyarada ah